Maitiro ekubaya sei Roblox account | la-manette.com
Maitiro ekubaya sei Roblox account
11 novembre 2021 ndima Claude henrichon
Kubira muakaundi yeRoblox yemumwe munhu kungaite semhinduro kudambudziko, asi kutaura zvakanaka, haudi kuzviita nekuti zvinogona kukuisa panjodzi, kunyanya kana uine vavariro dzakaipa.
Ndokumbirawo mubatsire account yangu iri ************ uye ndichangobirwa nhasi ndapedza simba rakawanda uye nguva paaccount iyi uye ndinoda kuidzosera.
Unogona here kubira musikana uyu anoramba achiita zvekuisa shamwari dzangu dzese dzeRoblox pandiri achiti achahack account yangu nekunditengesa kakawanda zita rake rekushandisa riri ***** ****.
Zita reakaundi yangu yeRoblox yakabiwa ndi****************. Ndine imwe account inonzi *******. Ndingazotenda zvikuru nekundibata neni kuburikidza neimwe account account kuti mundibatsire kuwana imwe account yangu uye kutaura neshamwari dzangu zvakare. Ndatenda !
Ndiri kuyedza kuwana yangu roblox account kubva 6 makore apfuura ndapota zita rayo rekushandisa ndere *********** ndinoda password. Kana zvakadaro, ndapota ndibate neni kuburikidza neimwe ********* account yangu.
Aya ndiwo mamwe emashoko atakawana pachinyorwa chedu chakapfuura icho chakatsanangura maakaundi eRoblox anowanzo biwa uye, kutaura chokwadi, izvi zvinowedzeredza zvemisiyano yakawanda yemubvunzo wekutanga wakafanana.
Muchokwadi, matani evanhu vanowanzova nechishuwo chekubira maakaunti evamwe vanhu eRoblox kana yavo uye vavimbe neni kana ndati hapana chikonzero. Vamwe vanotora nzira iyi vachiedza kushungurudza, kutsiva kana kubira account yemumwe munhu, nepo vamwe vachipa zvikonzero zvinoita sezviri pamutemo.
Kunyangwe zvisizvo, maakaundi eRoblox anogona kubiwa chero bedzi iwe uchitora mukana weiyo loopholes. Asi tisati tatsanangura kuti tingazviita sei, tinoda kukuyambira kuti usaverenge chinyorwa ichi kana chinangwa chako chiri chekubira account yeRoblox yemumwe munhu kuitira kuba Robux yavo.
Verenga zvakare: Chii chinonzi Elara app uye nei ichitadzisa Windows kuvhara?
Zvakadaro, kana iwe uri kutsvaga kudzoreredza account yako yakakanganiswa kana kubiwa, saka heino maitiro ekubira maakaundi eRoblox.
Tisati taenderera mberi tinoda kukuzivisai kuti dzidziso iri pazasi yakati rebei asi inogona kushanda nerombo rakanaka uye zvishoma zve…. brain.
Maitiro ekubaya maakaundi eRoblox (1st nzira)
Chekutanga pane zvese, zvakanyanya kuoma kugumburwa pane webhusaiti iyo inopa rock crystal yakajeka dzidziso yekuti ungabira sei Roblox account yemumwe munhu. Chikonzero ndechekuti ivo vanofunga kuti izvi hazvigoneke, asi senge mumwe munhu akambotaura, zvese zvepamhepo ndinoreva kuti zvese zvinobatika.
Naizvozvo, mune ino chinyorwa, tiri kuzoburitsa yakanakisa Roblox hack inoshanda mahara. Chete chinodiwa ndechekupinzwa muakaundi isingasviki rimwechete (1) gore. Zvino, pasina imwezve ado, heino maitiro ekubira maakaundi eRoblox.
Kuti utange, ita shuwa kuti Roblox account yawakapinda parizvino yadarika gore.
Mune ino kesi, iyo yangu Roblox account.
Zvino enda kune nhoroondo yeakaundi yaunoda kubira.
Uye heino iyo Roblox account yandinoda kubaya.
Kubva ipapo, vhura tebhu nyowani uye enda kune inotevera URL;
Iye zvino ita shuwa kuti mabhukimaki bar ari kuoneka. Kuti iite kuti ioneke, ingo dzvanya makiyi eCtrl + Shift pakhibhodi yako. Iwe unogona zvakare kuenda kune matatu akatwasuka madotsi pakona yekurudyi yeChrome. Kubva ipapo, isa mbeva yako pamusoro peBhukumaka, wobva wasarudza Ratidza Mabhukumaki Bar.
Kana zvangopedza, dhonza bhatani reNzira Yekutendesa rinoonekwa muURL yakanamirwa pamusoro kune yako bookmark bar.
Verenga zvakare: Ini ndinogonesa sei Android Developer Options, USB Debugging, uye OEM Kiinura?
Zvino gadzira tebhu nyowani muChrome uye tinya pane inotevera URL;
Kana yangotangwa, skira pasi kusvika waona Tiketi reKusimbisa. Kubva ipapo, tinya pane yekutanga girini POST bhatani rinoverenga se / v / authentication-tiketi
Rondedzero yekudonhedza pasi inofanirwa kuoneka, ingoitsvaga uye tinya bhatani re "Edza!"
Kubva ipapo, skira pasi zvishoma zvichidzika kusvika waona iwo mavara Mhinduro Misoro. Ikozvino kopira chete kodhi kubva kutikiti rechokwadi sezvakaratidzwa pazasi.
Nekodhi yakakopwa kuclipboard yako, skira pasi zvakare kudzamara waona mameseji Settings. Dzvanya bhokisi riri pasi peSample Value kurudyi.
Izvi zvinofanirwa kuratidza iyo Value bhokisi kuruboshwe. Zvino enda mberi uye bvisa tambo yemavara pasina makotesheni.
Kana zvangopera, enda mberi uye unamate kodhi kubva patiketi rechokwadi rawakakopa kare.
Wobva wanyora roblox.com mubhokisi riri pedyo RBXAuthenticationNegotiation. Kana zvese zvagadzirwa, tinya pa Edza Zvino!
Zvino dzokera kuprofile yaunoda kubira uye mubhawa rekero, tevedzera nhamba yekuzivikanwa iri pakati pevashandisi uye chimiro.
Kana nhamba yacho yakopwa, tinya nebhatani rekuruboshwe paAuthentication Method sarudzo mubhukimaki yako.
Bhokisi reID remushandisi rinofanira kuoneka, ingoisa iyo ID nhamba yawakakopa kubva pakutanga uye tinya ok.
Zvino enda mberi uye zorodza chimiro chawaida kubira uye iwe unofanirwa kuona zvinhu zvichishanda sezvaitarisirwa.
Maitiro ekubaya maakaundi eRoblox (2nd nzira)
Zvinoita senge url yechipiri yenzira yekutanga yaenda. Neraki, isu tawana nzira nyowani yekubira account yeRoblox yemumwe munhu pasina kukanganisa. Kana iwe watove kukwenya kudzidza matanho ekubira iyo Roblox account, heino maitiro.
Verenga zvakare: Yese Star Tower Defense Codes (Ndira 2022)
Kuti utange, enda kune imwe yeanotevera ma URL uchishandisa Chrome browser yako.
Kubva ipapo, dzvanya Ctrl + Shift + B pane kiibhodhi yako kuunza mabhukimaki bar.
Zvino enda mberi uye dhonza AccountUn-Locked 3.1 bhatani kubhukimaki bar.
Kana wapedza, enda kuwebhusaiti yeRoblox uye tinya bhatani reAccountUn-Locked 3.1 riri mubhukimaki bar.
Bhokisi richaonekwa, ingonyora zita remunhu waunoda kubira wobva wadzvanya ok. Ndizvo zvose.
Aya ndiwo maitiro ekubira maakaundi eRoblox. Chinhu chakanakisa pane zvese izvi ndechekuti hunyengeri hahuna kuoma kubata. Saka kunyangwe iwe usina PhD muinjiniya yesoftware, kunyangwe usiri tech-savvy geek, uye kunyangwe iwe usina inouraya yedhijitari arsenal inobatwa online, unogona kuita izvi. roblox hack vasina kutendeseka. Usakanganwa kusiya mhinduro pazasi kana yakakushandira iwe. Kusvika panguva iyoyo, hack inofadza.
Genshin Impact yekuburitswa zuva - ichave iripo riini paNintendo Shandura?
Roblox Hack: Aya ndiwo maitiro eRoblox maakaundi
5 pfungwa pa "Maitiro ekubira account yeRoblox"
Mbudzi 24 2021 kusvika 17 h 07 min
mhoro iwe unogona kutangazve account yangu s call andreiparaschiv901 its been 2 years
10 december 2021 kusvika 2 h 45 min
Practically todos los links no funcionan
26 december 2021 kusvika 13 h 09 min
January 3 2022 kuna 11 49 H Maminitsi
January 4 2022 kuna 19 29 H Maminitsi
Mhoro. Hanzvadzi yeshamwari yake yakabirwa account. Haachakwanisi kubatana. Ndakakwanisa kutora ID yake (3154448491) asi ndaizoda zita rake, nhamba dzenhare kana email kero kuti ndikwanise kumhan'ara. Mungandibatsirewo here